ကျွန်ုပ်၏ အယူဝါဒ-၅ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ကျွန်ုပ်၏ အယူဝါဒ-၅
Posted by asiamasters on May 1, 2011 in Business & Economics, Health & Fitness, Science & Religion |0comments
(ကျွန်ုပ်၏ အယူဝါဒ-၅ မှာ ကျွန်တော် ယခင်ရေးသားခဲ့သည့် ခွန်အား ကို အယူဝါဒ အဖြစ်ပြောင်းလဲထားခြင်းဖြစ်သည်။)
၁။ ကျွန်ုပ်၏ အယူဝါဒ-၅ မှာ ခွန်အား (Strength) ဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတွေမှာ ခွန်အားကြီးမားလာဖို့ လိုပါတယ်။ မိမိရှင်သန်ခွင့် ရတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ အမြဲတစေခွန်အားကြီးထွားအောင် ကျိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နေရမယ်။ လူသားတွေမှာရှိတဲ့ ခွန်အားတွေ ကို ကိုယ်ကာယခွန်အားနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားဆိုပြီး နှစ်ပိုင်းခွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒီခွန်အားနှစ်မျိုးစလုံး တိုးတက် လာမှသာ အမှန်တကယ် ခွန်အားကြီးသူတွေဖြစ်လာကြပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်ကာလဟာ ပြိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ဖေါက်ပြန်မှုတွေ အလွန်ကြီးမား လာတဲ့ အတွက် ခွန်အား နဲပါးသူတွေ၊ ခွန်အားယုတ်လျှော့နေသူတွေဟာ ဆက်ပြီး ရှင်သန်ဖို့တောင် သိပ် မလွယ်ပါဘူး။ ပြိုင်ဆိုင်မှု ဆိုတဲ့ နေရာမှာ လူသားတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးပြိုင်ဆိုင်မှုတွေသာမက လုပ်ငန်းငယ်လေးတွေလည်း ပြိုင်နေရပါတယ်။ လုပ်ငန်းကြီးတွေလည်း ပြိုင်ရပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပြိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ မပြိုင်နိုင်သူတွေ ဟာ ပြုတ်ပြတ် ပြီးကျန်နေခဲ့တာပါပဲ။ ပြိုင်နိုင်မဲ့ အနေအထားမျိုး သန်စွမ်းမှာသာလျှင် ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ် ဆိုရိုး လေး တစ်ခုပြောရင် Survival of the fittest လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သန်စွမ်းသူသာ ရှင်သန်မှာဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ကိုယ်ကာယ ခွန်အား ရော၊ စိတ်ဓါတ်အင်အားပါ အမြဲတိုးပွားနေအောင် လုပ်ဆောင်နေရမှာ ဖြစ် ပါတယ်။
၂။ ကိုယ်ကာယခွန်အားဘယ်လိုတိုးပွားအောင်လုပ်မလဲဆိုတာကစကြရအောင်။ လူသားတစ်ဦးဖြစ်လာရင် ခန္ဒာ ကိုယ်ရတာပါပဲ။ လူ့ခန္ဒာကိုယ်ရဲ့ အဓိကလိုအပ်ချက်ဟာ လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဒာဆိုတာ လှုပ်ရှားပြောင်းလဲမှု သဘောဖြစ်တယ်။ ခန္ဒာကိုယ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ Cell တွေ၊ ဟာ အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်။ အရိုးတွေ၊ အဆစ်တွေ၊ အကြောတွေ၊ ဝမ်းတွင်း အဂ်ါအားလုံးဟာ သင့်တော်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုလိုအပ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေး ကျား/မ မရွေး လှုပ်ရှားမှုအတွက် အနည်းဆုံးလမ်တော့ လျှောက်ကြ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး အားကစားလှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်နိုင်ရင် တော့ပိုကောင်းပါတယ်။ လူတစ်ချို့က ဝင်ငွေမလုံလောက်လို့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမလုပ်နိုင်တာတို့၊ အလုပ်များလွန်း လို့ မလုပ်နိုင်သေးတာအစရှိသည်ဖြင့် ကျိုးကြောင်းပြပြီး ပျင်းယိနေသူများ ရှိပါတယ်။ အများအားဖြင့် ဒီနေ့ခေတ်မှာ Internet သုံးစွဲတာများတဲ့သူတွေဟာ လှုပ်ရှားမှုတွေရော့နဲသွားတတ်ပါတယ်။ ရောဂါ ဝေဒနာ တစ်ခုရလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ငွေကြေး ကုန်ကျ တာအပြင်နာကျင်မှုဝေဒနာများကိုပါ ခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျန်းမာနေစဉ်အတွင်းမှာ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားလုပ်ဘို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမဲလည်း မိမိကိုယ်မိမိ ညှင်းဆဲ့တာမျိုးတော့ မလုပ်ရ ပါဘူး။ ဒါဟာခွန်အားကြီးမား စရာ အခြေခံအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားပြီးတာနဲ့ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးဟာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ သန့်ရှင်း စင်ကြယ်ခြင်း ဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ခြင်း ရဲ့အစဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိကိုယ်တိုင်သန့်ရှင်းရေးအတွက် ရေချိုးရမယ်၊ ခေါင်းလျှော်ရ မယ်။ လက်သဲ၊ ခြေသံများမှန်မှန် ညှုပ်ရမယ်။ လက်ကိုဆပ်ပြာနဲ့ ခဏခဏဆေးရမယ်။အစာမစားခင်လက်ဆေးရမယ်။ အိမ်သာကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းလက်ဆေးရမယ်။ အစားအသောက်များကိုလက်ဖြင့် တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်ခြင်းမှ ရှောင်ကျဉ်ရ မယ်။ ချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာလည်း ချက်ပြုတ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့အိုးခွက်ပန်းကန်တွေ၊ ချက်ပြုတ်မဲ့ရေ၊ဆန်၊ ဟင်းသီး ဟင်း ရွက်နဲ့အသားတွေ အားလုံးသန့်ရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူအတော် များများဟာ မိမိကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမှာကို မေ့ လျှော့ နေတတ်သလို၊ မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းသန့်ရှင်းရမှာကို မေ့လျှေ ာ့နေကြ တာပါတယ်။ မိမိရဲ့ အိမ်အတွင်း၊ အိမ်အပြင်၊ ရပ်ကွက်၊ လမ်းများ၊ ဈေးများ၊ အများပြည်သူအသုံးပြုသည့် ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ မြို့တော်ကြီးများ အားလုံးကို သန့်ရှင်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မသန့်ရှင်းသောသူ၊ မသန့်ရှင်းသောနိုင်ငံများတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း မဖြစ်ပါ။
၄။ သန့်ရှင်းပြီးတာနဲ့ အရေးတာက အဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာများ (Wholesome food) တွေကို စားသောက် ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောတာဟာ ဈေးကြီးတဲ့ အစားအစာတွေကိုစားဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် တို့လူ သားတွေရဲ့ အစား အသောက်တွေဟာ လူသားတွေအတွက်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ အစားအသောက်တွေဟာသန့်ရှင်း ရမှာဖြစ်သလို၊ အဟာရ ပြည့်ဝရန် (Nutritious) လည်းအလွန်လိုပါတယ်။ လူသားတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အကြမ်း ဖြင်း အားဖြင့် ကစီဓါတ် (Starch)ှ၊ အသားဓါတ် (Protein)၊ ကယ်လစီယမ်ဓါတ် (Calcium)၊ နဲ့ ဗီတာမင်ဓါတ်များ (Vitamins) တွေလိုအပ်ပါတယ်။ လူသားတွေစားသောက်တဲ့ အစားအစာတွေမှာ အဟာရပြည့်မပြည့် လေ့လာတဲ့ ပညာကို (Nutritious Science) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဒာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် လူသားတွေဟာ ကစီဓါတ်နဲ့ အသားဓါတ်ကို စားရန်လိုပါတယ်။ ကစီဓါတ်က်ု ဆန်၊ ဂျုံ၊ ပြောင်း၊ အစရှိတဲံ အနှံကဖြစ်တဲ့အစားအစာတွေကရနိုင်ပါတယ်။ အသားဓါတ်ကို တော့ သက်ရှသတ္တဝါတွေရဲ့ အသားတွေကနေရရှိပါတယ်။ အမဲသား၊ ဆိတ်သား၊ ဝက်သား၊ ကြက်သား၊ ငါး အစရှိသည့် အသားများမှ ရရှိပါတယ်။ အကယ်လို့ အသားမစားချင်ဘူးဆိုရင် အလွယ်ဆုံး Protein ရနိုင်တာက ပဲမျိုးစုံမှဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူသားအားလုံးဟာ ပဲကို မဖြစ်မနေစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရိုအဆစ်တွေကြီးထွားဖို့က ကယ်လစီယမ် (Calcium) လိုပါတယ်။ ကယ်လစီယမ်ကို နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ (Dairy Products) ကနေရပါတယ်။ နို့ထွက်ပစ္စည်း တွေ ဖြစ်တဲ့ နွားနို့၊ ဒိဉ်ချဉ်၊ Cheese တွေကိုစားသောက်ရန်လိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နို့မှာက အဆီပါဝင်မှုများတံအတွက် အသက် (၄၀) ကျော်သူများလျှော့စားသင့်ပါတယ်။ ဗိုက်တာမင်မျိုးစုံကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနဲ့ အသီးများကရပါတယ်။ လူသား တွေ အတွက် ဗိုက်တာမင်အားလုံးဟာ အရေးကြီးသော်လည်းအရေးကြီးဆုံးက ဗီတာမင် စီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီဓါတ် ဟာ အချဉ်ဓါတ်ဖြစ်ပြီး သံပုရာသီး၊ ရှောက်သီးနဲ့ လိမ္မော်သီးတို့ကရပါတယ်။ အသီးတစ်နေ့တစ်လုံးစားနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ An appleaday, keepadoctor away. ဆိုပြီးဆိုရိုးစကားလေးတစ်ခုရှပါတယ်။ ပန်းသီးတစ်နေ့တစ်လုံးစားပေးခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးကို တိုးတက် စေသည်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ် အသီးတစ်လုံးလောက်စားပါ။ မစားဖြစ်ရင် Orange Juice တစ်ခွက် လောက်တော့သောက်ပါ။ မသောက်ရင် တုတ်ကွေးတို့၊ အအေးမိတာတို့ မကြာခဏဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်အရေးကြီးတာက သန့်ရှင်းတဲ့ရေကို အလုံအလောက်သောက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့ကိုရေ မတ်ခွက်နဲ့ (၈) ခွက်ခန်သောက် သင့်ပါတယ်။ အိပ်ချိန်ပြည့်ဝရန်လိုပါတယ်။ ချိုလွန်း၊ ငန်လွန်းသော အစားအစာများကိုရှောင်ကျဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၅။ နောက်ခွန်အားတိုးရန်လိုအပ်ချက်ကတော့ မကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်များကို ပယ်ဖျက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ လူမျိုးများအတွက် အဆိုးရွား ဆုံး အကျင့်စရိုက်က ကွမ်းစားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကွှမ်းစားလိုက်တာနဲ့ လူတစ်ယောက်မှာရှိသင့်တဲ့တန်ဘိုးနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ တွေပျောက်ကွယ်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ မသိသာသော်လည်း နိုင်ငံတကာ အဆင့်ရောက်လာရင် အလွန်သိသာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကွမ်းစားခြင်းနဲ့ ကွမ်းရောင်းခြင်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပပျောက်အောင်လုပ်ရပါမယ်။ ကွမ်းမှာပါတဲ့ ဆေးရွက်ကြီးဟာ စွဲလမ်းစေတတ်ပြီး ကင်ဆာရောဂါကိုဖြစ်စေပါတယ်။ စွဲလမ်းတတ်တဲ့အရာတွေဟာ စိတ်ကိုပြောင်းလဲ စေတတ်တဲ့ဆေးဝါးတွေလည်းပါလာပါတယ်။ လူဆိုတာက မလုပ်ပါနဲ့ လို့တားမြစ်ရင် ပိုလုပ်ချင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ ဆေးလိ်ပ်၊ ဘီယာ၊အရက် တွေဟာ Entertainment ၊ Social နဲ့ addiction လို့ခေါ်တဲ့ စွဲလမ်းခြင်းတွေ ရောယှက်နေပါတယ်။ လူ့အသိုင်းအထဲမှာနေရင် ဒါတွေကိုရှောင်ဖို့သိပ်မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ addiction လို့ခေါ်တဲ့ စွဲလမ်းခြင်းဖက်ကို မရောက်သွားဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ အဆိုဆုံးကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးများဖြစ်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေဝါးမှာ ဆေးပြားများမှသည် No.4ဟီးရိုးအင်းများအထိပါပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ စမ်းလိုက်တာနဲ့ စွဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးတွေအပေါ်မှာ မှီခိုလိုက်ပြီ ဆိုမိမိတုု့ရဲ့ ခွန်အားများ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ရုပ်လျှော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၆။ ဒါကြောင့် လူသားများ မိမိတို့ခွန်အားတွေတိုးလာရန် လှုပ်ရှားမှုနဲ့ အားကစားများအခုစလုပ်ပါ။ တစ်ကိုယ်ရေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းအောင်ကျိုးစားပါ။ အဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစားအသောက်များကို စားပါ။ မကောင်းတဲ့ အကျင့် စရိုက် များကို ပယ်ဖျောက်ပါ။
၇။ ကိုယ်ခန္ဒာရလာတဲ့လူတွေဟာ လှုပ်ရှားဖို့လိုအပ်ပေမဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်ဖို့ကြတော့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်ဖို့ အတွက် တစ်နေရာတည်းမှာ အာရုံစူးစိုက်ဖို့လိုတယ်။ အာရုံစူးစိုက်လေလေ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အင်အားတိုးပွားလာလေလေပါပဲ။ စိတ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းဆိုတာက တစ်စုံတစ်ရာကို ပြင်းပြင်းပြပြ ယုံကြည်ခြင်းကစပါတယ်။ ပြင်းပြင်းပျပျ မယုံကြည်သူများဟာ အမြဲတမ်းစိတ်အာရုံထွေပြားနေလေ့ရှိတယ်။ ပြင်းပြင်းပျပျ ယုံကြည်တယ်ဆိုတာက မိမိရဲ့ယုံကြည်မှုကို ဘာမှမေးခွန်းထုတ်စရာမလိုတော့တဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးကို ဆိုလိုတယ်။ မိမိလုပ်တဲ့ အလုပ်က မှန်ကန်တယ်၊ တရားဥပဒေနဲ့ အညီဖြစ်တယ်၊ မျှတယ်ဆိုတာကို ပြင်းပြင်းပျပျယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ ဒီလိုယုံကြည်မှုမျိုးမရှိရင်တော့ လူသားတစ်ဦးအတွက် မဆိုပါနဲ့ အင်မတန်အင်အားကြီးမားတဲ့ အင်ပါယာကြီးတွေ၊ စစ်တပ်ကြီးတွေတောင်မှ ပြိုကွဲ ရှုံးနိမ့် သွားရတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာကိုပဲလုပ်လုပ် သေးငယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကြီးမားတာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြင်းပြင်းပျပျ ယုံကြည်ဖို့လိုပါတယ်။
၈။ ပြင်းပြတဲ့ယုံကြည်မှုကို (Passion) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ပြင်းပြတဲ့ ယုံကြည်မှုရှိတဲလူတွေဟာ ဗဟုသုတ (Knowledge) ကိုရကြတာဖြစ်တယ်။ ဗဟုသုတရှိလာသူတွေဟာ ပိုပြီးတော့ ဇွဲ (Perseverance) ရှိလာကြပါတယ်။ ဇွဲရှိသူများဟာ ကတိတည်သူများဖြစ်လာကြပါတယ်။ ကတိတည်သူများကို လူအများက ချစ်ခင်ကြပါတယ်။ ဒါမှ တဆင့် ညီရင်းအကို ချစ်ကြည်မှု (Brotherly Love) ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ ညီရင်းအကို ချစ်ခင်မှုတွေများလာရာက မေတ္တာတရား(Love)ကို ဖြစ်စေပါတယ်။ မေတ္တာတရားဆိုတာက သူတစ်ပါးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလိုလားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မေတ္တာတရားများများရှိသူတွေဟာ ပိုပြီးတော့ ပြင်းပြတဲ့ယုံကြည်မှုတွေရပြန်တာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် လူသားတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားကို တိုးပွားစေတာဟာ မေတ္တာတရားသာလျှင်ဖြစ်တယ်။